Tag: girama | Martech Zone
Pane dzimwe nguva muhupenyu hwangu uye pandakanga ndichienda kukoreji ini ndaibvunza kugona kwangu kunyora. Nekutenda, blogging yakauya uye (most) vaverengi vakadzora yavo yekuverenga mwero. Vaverengi vari kuongorora nekutenda kupfuura zvikanganiso nekurembera kutora chikamu, kupatsanura zvishoma, zvirevo, zvirevo zvekushandura, zvirevo, zvirevo zvinoenderana, uye zvakapusa zvinyoronyoro zviperengo. Izvo zvaive zvisiri zvechokwadi munguva yakapfuura, asi tese tiri vanyori vane hunyanzvi izvozvi. Hapana zuva rinopfuura iro vatengesi vanofanirwa kunyora